Shiinaha FRP Flange tee Supplier iyo Factory | Zhaofeng
Waxaa naga go'an shirkadaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Hore u soco!
Taageerada Email sales@frpzf.com
Taageerada Wicitaanka 0086-13722829819
Dhuumaha Dhuxusha FPP
FRP Tuubada Ciidda
FRP dhuumaha Anti-static
FRP tuubo laba-lakab ah
FRP dhuumaha saddexda lakab
Ku rakibida tuubooyinka FRP
Haanta kaydinta FRP
Haanta kaydka ee Acid iyo alkali
FRP Haanta kaydinta cuntada
Taangiga kaydinta biyaha ee FRP ultrapure
Feeraha FRP waxaa lagu sameeyaa "dabayl + gacmo -dhigis", iyo shaashadda FRP ee ay samaysay FRP "boog + gacan -dhigis" ayaa si guud loogu sameeyay caaryada.
Habka Samaynta Tee FRP
Feeraha FRP waxaa lagu sameeyaa “dabayl + gacmo -dhigis”, iyo shaashadda FRP oo ay samaysay FRP “dhaawac + gacanta -dhigid” ayaa si guud loogu sameeyay caaryada. Birta hadda jirta ama qaababka FRP ee ka hooseeya DN3000 ayaa loo adeegsadaa shaashadda FRP. Alaabta ceyriinka ah ee FRP waxaa si wada jir ah u samaysmay qaab -gacmeed. FRP Tee waxay hagaajin kartaa sifooyinka jirka iyo kiimikada ee badeecada iyada oo la beddelo isku-darka alaabta ceyriinka ah, qaab-dhumucda lakabka dahaarka gudaha, lakabka qaab-dhismeedka, lakabka ka-hortagga gabowga ee dibedda, iyo hannaanka wax-ka-beddelka si loo waafajiyo baahiyaha warbaahinta kala duwan iyo xaaladaha shaqada. Hagaajinta dhinacyada.
Tilmaamaha iyo moodooyinka: jira DN50 ~ DN3000 noocyo kala duwan oo dhexroor siman ah, yaraynaya kabaha, iyo madaxa cabbirka.
FRP Tee sidoo kale waxay soo saari kartaa fangiyada FRP oo leh tilmaamo kala duwan, qaabab kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka.
Muuqaal qurux badan oo u gaar ah, xoog sare, culeys khafiif ah, nolol adeeg dheer, iska caabin daxaladeed oo xoog leh, ka-hortagga wasakhda iyo iska caabbinta aboorka, gaadiid yar iyo kharashyada rakibidda, iska-caabbinta khilaafaadka oo hooseeya, awoodda gaadiid oo sarreeya, iska caabin wanaagsan oo duug ah, la-qabsi xoog leh, kharashyada dayactirka oo hooseeya , Nolosha mashruuca oo dheer, ammaan ah oo la isku halleyn karo, iwm.
Arrimaha u baahan fiiro
Feeraha FRP waxaa kaliya lagu isticmaali karaa xaaladaha naqshadeynta, dhexdhexaadka la isticmaalayna laguma beddeli karo siduu doono;
Iska ilaali taabashada walxaha fiiqan oo adag;
Haddii waxyeello la helo, waqtigeeda ku hagaaji;
Wax iyo dhaldhalaalaan jadwalka, rinjiga mari, sii qurux badan oo waara
Marka loo eego astaamaha shaqaynaya ee shaashadda FRP, rakibidda tuubooyinka FRP waxaa si ballaaran loogu adeegsan karaa batroolka, kiimikada, tamarta, elektiroonigga, biraha, dhismaha dowladda hoose, cuntada, warqadda, ilaalinta deegaanka iyo warshadaha kale. Naqshad gaar ah ka dib, waxay si buuxda ula kulmi karaan macaamiisha kala duwan iyo xaalado shaqo oo kala duwan. Baahiya.
Hore: Fiilooyinka FRP tuubooyinka FRP Flange
Xiga: Flange dabacsan
Frp tuubooyinka rakiban
Fiberglass fuuli technology-2
Fiberglass fuuli technology-1
Astaamaha korantada ion chloride ...